Waa maxay Khaliijka | Saadaasha Shabakadda
Juquraafiga dhulku wuu dhismayaa in ka badan malaayiin sano dhulkeenna. Waxaa keena cilladaha, dhul gariirka, nabaad-guurka dabaysha oo sii socda, hirar xoog leh, jiidis, biyo-gelin, iwm. Waa geedi socodyo cilmiyadeed oo soo kordha qaababka juquraafiyeed ee aan u aragno natiijada maanta. Qaababka sida bays, buuraha iyo koofiyadaha.
Xaqiiqdii waad aragtay bohol aad ka fakartay sidaad u samaysantay. Ma dooneysaa inaad ogaato waxa qulqulka uu yahay iyo maxay tahay qaab dhismeedkiisu?
2 Qeexida baay iyo bakhayl
3 Farqiga u dhexeeya gulf, bay iyo cove
4 Gulufyada ugu caansan adduunka
4.1 Gacanka mexico
4.2 Gacanka alaska
4.3 Gacanka Saint Lawrence
Gacanka waa muuqaal juqraafi ahaan lagu garto lahaansho qayb weyn oo badda ama bada ka mid ah ayaa la keenay dhulka. Waxay ku taalaa inta udhaxeysa laba madax ama laba jasiiradood. Gulufku badanaa waa qoto dheer yahay waxayna leeyihiin muhiimad dhaqaale oo aad u weyn tan iyo, mahadi ha ka gaadho meesha ay ku sugan yihiin iyo dabeecadda juqraafi ahaan, waxay u adeegaan inay ka ilaaliyaan xeebta badweynta. Tani waxay door bidaysaa dhismaha dekedaha iyo waxsoosaarka si loo kordhiyo dhaqaalaha xeebta.
Ereyga 'gulf' waxaa badanaa lagu jahwareersan yahay qulqulka ama godadka, si kastaba ha noqotee, isku mid ma aha.
Qeexida baay iyo bakhayl
A bay waa marin biyood laga soo galo badda ama haro taas ku dhowaad gebi ahaanba hareeraha dhulka, sida gulufka, marka laga reebo mid ka mid ah darafyadiisa. Baysyada ayaa la sameeyay sanadihii la soo dhaafay sababo la xiriira nabaad-guurka xeebta waxaana aqoon u leh juquraafiyayaashu inay yihiin isku-xirnaan xeebeed. Biyaha ayaa si isdaba joog ah u garaacaya xeebta waxayna qaabeynayaan sanadihii la soo dhaafay si ay u abuuraan qaab noocan oo kale ah.
Waad dhihi kartaa in bada ay ka soo horjeeddo jasiirad Halka jasiiraddu ay tahay dhul dhul ah oo ay biyuhu ku hareeraysan yihiin marka laga reebo hal dhinac, baddu waa qayb ka mid ah biyaha ku wareegsan dhulka marka laga reebo hal dhinac.
Bini'aadamku wuxuu ka faa'iideystaa badaha, sida gulfs, dhismaha dekedaha si kor loogu qaado dhaqaalaha deegaanka.
Dhinaca kale, Juqraafi ahaan Cove waxaa lagu qeexay astaamo juqraafiyeed xeebeed oo ay sameysay biyo mareenka oo qaada qaab wareeg ah oo ilaaliya af cidhiidhi ah, oo badanaa ka samaysan dhagaxyo.
Farqiga u dhexeeya gulf, bay iyo cove
Maaddaama ereyadan sida caadiga ah lagu jahwareersan yahay, juqraafiga ayaa soo saaray farqiga u dhexeeya. Guluf, bad iyo marin biyood, in kasta oo ay qaabab isku mid ah leeyihiin, haddana waxay wadaagaan faraqa dherer iyo qoto dheer. Sababtaas awgeed, gulufku waa kan ugu horreeya ee leh cabbirka iyo weynaanta weyn, oo ay ku xigto boodhadhku, isagoo inyar ka hooseeya oo gaabis ah kuna dhammaanaya meelaha laga galo.
Qolalka albaabka waxaa loo daayay meeshii ugu dambeysay, tan iyo markii uu aad u yaraa ee aad u hooseeyayHalkii laga beddeli lahaa xeebta, waxaa wax ka beddelaya dhagaxyada ka soo baxa badda ee badda.
Saddexdaas cilmi dhul dhul waxa ay wadaagaan ayaa ah in loogu talo galay dhismaha dekedaha si loo horumariyo dhaqaalaha aagga. Dakadaha si fudud ayaa loo dhisi karaa, maaddaama biyuhu ay daciif yihiin qaababkani waxay ka ilaalinayaan kor u kaca qulqulka.
Intaa waxaa dheer, quruxda ay bixiyaan ee muuqaalka dhirta, waa qodobbo muhiim u ah dhaqaalaha adduunka, Kaliya maahan dhismaha dekedaha, laakiin sidoo kale waxaa loogu talagalay inay noqdaan goobo lagu kala iibsado badeecada baaxad weyn, kuwa ka imanaya waddan gaar ah iyo kuwa ka tagaya, intabadan waxaa si aad ah loo raadiyaa meelaha loo dalxiis tago, iwm.
Gawaarida, oo ka yar cabir ahaan iyo qoto dheer, looma isticmaalo si ballaadhan dhismaha dekedaha, in kastoo dekedo yaryar mararka qaarkood la dhiso, ayaa loo isticmaalaa in loo isticmaalo xeebo ahaan, waxaa ku mahadsan xaqiiqda ah in dhagaxyada ay ku xiraan biyaha oo aan u oggolaanayn inay yeeshaan hirar ama mowjado xoog badan.
Gulufyada ugu caansan adduunka
Mar alla markii aad baratay qeexitaanka qulqulka iyo farqiga u dhexeeya biyo iyo godad, waxaa la joogaa waqtigii aad la kulmi lahayd kuwa ugu muhiimsan uguna caansan adduunka. Waxaa jira guyaal badan oo meeraha ah, laakiin kuwa ugu muhiimsan ee baaxadda weyn leh waa Gacanka Mexico, Gacanka Alaska iyo Gacanka St. Lawrence.
Gacanka Mexico wuxuu kuyaala inta udhaxeysa xeebaha Mexico (gobolada Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche iyo Yucatán), xeebaha Mareykanka (gobolada Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana iyo Texas) iyo xeebaha laga bilaabo jasiiradda Cuba (qaybta bari ee gacanka, marinkeeda ilaa Badweynta Atlaantik).
Gacanka Alaska wuxuu ka kooban yahay dhul ballaadhan oo badweynta Baasifigga ah oo ku teedsan xeebta koonfureed ee Alaska, dhinaca galbeedna waxa kaga teedsan Jasiiradda Alaska Peninsula iyo Kodiak Island, halka dhinaca bari ay ka xigto Alexander Archipelago oo ku taal Glacier Bay. Gacanka Alaska waa mid aad u balaaran qoto dheer iyo baaxad ahaan taas oo loo arko inay tahay bada.
Inta badan roobabka la ururiyo xilliyada roobka ee Woqooyi Galbeed ee Baasifigga waxay ku dhacaan gulufkan. Xeebtu aad bay hoos ugu degtaa waxayna leedahay marinno dhaadheer. Qof kasta oo u tagi kara inuu arko, waxaad ku raaxeysan kartaa muuqaalka dhirta keymaha, buuraha iyo barafka ku yaal aagga xeebta.
Webiga ugu weyn ee mara marinka gacanka waa kan Alaska. Waa durdur qayb ka ah suunka wax lagu rarto, waa mid diirran dabeecad ahaanna u socda waqooyiga.
Xaaladaha qaab dhismeedkeeda iyo qaab dhismeedka juqraafi ahaan awgeed, Gacanka Alaska wuxuu si joogto ah u soo saaraa duufaanno. Dhacdadan ayaa ku soo kordhay soo noqnoqoshada iyo xoojinta aagagga Arctic Circle, halkaas oo duufaannada ay uga sii darayaan baraf badan iyo baraf. Dhowr duufaano ka mid ah waxay u dhaqaaqaan dhanka koonfureed ama xeebta British Columbia, Washington, iyo Oregon.
Gacanka Saint Lawrence
Gacankaasi wuxuu ku yaal bariga Kanada wuxuuna isku xiraa Badweynta Atlantik. Waa qulqul aad u ballaadhan. Wabiga St. Lawrence wuxuu ka bilaabmaa harada Ontario dhexdeeda, iyada oo loo sii maro marinka ugu weyn adduunka, wuxuu ku daadanayaa godkan.
Macluumaadkan waxaad awood u yeelan doontaa inaad si fiican u ogaato farqiga u dhexeeya gulfs, bay iyo marinka iyo inaad ku ogaatid gulfyada ugu muhiimsan adduunka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Waa maxay Khaliijka?
8,2 dhulgariir ayaa gilgiley Alaska wuxuuna kiciyay digniin tsunami